Gadaa Malee Abbaan Gadaa Bakka Hin Jiru. | OROMSIIS OROMO
Leave a Comment	/ February 14, 2021 June 16, 2021
Gadaatu bakka jira malee Abbootiin Gadaa bakka hin jiran. Abbaa Gadaa Tuulamaa fi barreessaa Gamtaa Abbootii Gadaa Oromoo Goobanaa Hoolaa
Haala naannoo Oromiyaa keessa jiruufi gahee Abbootiin Gadaa nageenyaafi tokkummaa tiksuu keessatti qaban irratti BBC waliin turtii kan taasisan Abbaan Gadaa Tuulamaafi Barreessaan Gamtaa Abbootii Gadaa Oromoo Goobana Hoolaa, rakkoon hin furamne rakkoo dabalataa dhale jedhan.
“Wanti amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru kun maddi isaa rakkina kana dura Oromoo irratti hojjetamaa tureefi kuufamaa turetu hanga ammaa furmaata hin argatinidha. Bu’uurri rakkoo waan kana jalaa furaa deemuu dhabuudha,” jedhan.
Abbootiin Gadaas rakkoo kana furuu keessatti gahee keenya sirritti hin bahannes jedhu Abbaan Gadaa kun.
“Gadaatu bakka jira malee Abbootiin Gadaa bakka hin jiran kan jedhan Abbaan Gadaa Tuulamaa fi barreessaan Abbootii Gadaa Oromoo Goobanaa Hoolaati .
“Gamtaan Abbootii Gadaa waan Sirna Gadaa irratti hojjechaatuma jirra kan jedhan Abbaan Gadaa Goobanaa Hoolaa saniin ala kan jiru immoo Gadaan xurii hin jaalattu; jeequmsa hin jaalattu tokkummaa malee jedhu.
Abbaan Gadaa Goobanaa Hoolaa akka jedhanitti rakkoo Kana furuuf immoo karaa hariiroo mootummaa fi uummataa, rakkoon akka furamu gochuurratti hagas mara hojjechuu hin dandeenye,” jedhan.
Dhimma Hidhamtoota lagannaa nyaataa irra jiran irratti gaaffii gaafatamaniif yeroo yaada kennanis Abbaan Gadaa Goobanaa Hoolaa Hidhamtoota nyaata lagatan akka nyaatan gaafachuufis Abbootii Gadaa keessatti garaagarummaan yaadaa waan uumameef osoo walii hin galiin hafuus dubbatan.
Akka Abbaan Gadaa Goobanaa Hoolaa jedhanitti “Gaafa Kitaabni Alii Birraa eebbifamu sana Abbootiin Gadaa muraasni walgeenyee akkaataa waan kana gidduu seennu irratti yaada kaasnee mari’anne. Ciisnee uffata afneetuma kadhanna jedhee yaada kaasefiin ture. Yaanni kun fudhatama hin arganne,” kan jedhan Abbaan Gadaa kun Dhimma uummata Oromoo kan gartuu lamatti qoodamee jiru jidduutti Abbootiin Gadaa gahee keenya baanee furmaata akka argatu gochuuf rakkannee jirras jedhan Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa.
Rakkoo amma Oromiyaa keessa jiru yeroo dubbatanis “Uummata Oromoo kan garanaafi gamas walqoode gidduu dhaabbattee dubbachuu baayyee ulfaata. Nu uummata Oromoo bal’aatu nu faana hiriiree jira waan ta’eef gara tokko qabachuu hin dandeenyu. Kana kana rakkanne nuuf hubadhaa,” jedhan.
Gara fuulduraafis dhimma Oromoo fi Oromiyaa keessatti mudatee jiruuf furmaata taha jedhan yeroo kaayanis
Gareen walqoodu Oromoo gidduutti akka hin jiraanneef dhamaatii guddaa goone kan jedhan Abbaan Gadaa, ammas bullukkoo hafnee alangee ciibsinee araaraf kadhanna jedhan.
Maddi :BBC Afaan Oromoo